Guddoomiyaha hadda ee Baarlamaanka Puntland oo rajo wanaagsan ka qaba Doorashada Madaxweynaha – Kalfadhi
Guddoomiyaha Ku-meel-gaarka ah ee Golaha Wakiillada Puntalnd, Xuseen Xaani Yaasiin Diiriye, ayaa Warbaahin Maxalli ah wareysi uu siiyey ku sheegay inuu aad ugu han weyn yahay in Doorashada Guddoonka Golaha, oo dhici doonta Jimcaha iyo tan Madaxweynaha, oo dhici doonta Talaadada ay pu dhici doonto si qurxoon, oo sida la qorsheeyey ah. “Doorashadu si wacan bey u dhici doontaa” ayuu yiri Guddoomiye Diiriye.
Waxa uu sheegay in, laga soo bilaabo sidii ay ku soo bilaabatay soo xulista iyo ansixinta wakiillada, ay u arkaan iney ilaa Doorashada Madaxweynaha ay wax walba ku socon doonaan sidii loo qorsheeyey, sida uu hadalka u dhigay.
Xuseen Xaaji waxa uu sheegay iney Wakiillada Puntland dooran doonaan qofka ugu ad-adag ee ka mid ah musharraxiinta sharraxan, sida uu warka u dhigay. Waxa uu yiri “Intaan arkayey Baarlamaanka Puntland, mar walba musharraxiinta, waxay ka doortaan ninka ugu qiimaha badan ee ugu ad-adag”.
Guddoomiye Diiriye waxa uu maanta soo saaray warqad ay ku qornaayeen 7 Xubnood, oo ka tirsan Xildhibaannada cusub ee Puntland, kuwaas oo ah Guddiga ka shaqeyn doona Doorashada Guddoonka Golaha oo dhici doonta 4-ta bishan, waxaana ay Guddoonka maalintaas la soo doorto ka shaqeyn doonaan soo doorashada Madaxweynaha, oo ay u tartamayaan ugu yaraan 32 Musharrax.
Isimada oo sheegay iney Puntland ka noqotay go’aan ay ku mamnuucday DFS